Fampiatoana fandaharana:: Nametraka fitoriana ny Holafitry ny mpanao gazety • AoRaha
Fampiatoana fandaharana Nametraka fitoriana ny Holafitry ny mpanao gazety
Nametraka fitoriana mangataka ny hampiatoana sy ny hanafoanana ny fanapahankevitra noraisin’ireo minisitera maromaro mandrara ny fandefasana ireo fandaharana amin’ny haino aman-jery maromaro ny Holafitry ny mpanao gazety (OJM), omaly. Ny fanohintohinana ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety no vontoatin’ny fitoriana nalefan’ny OJM, eny amin’ny Filankevi-panjakana.
Notsindrian’i Clément Jaona, filohan’ny Sendikan’ny mpitsara (SMM) fa “fotoana samihafa no itenenan’ny Holafitry ny mpanao gazety sy ny fanjakana momba ilay fanapahan-kevitra niraisan’ ireo minisitera mandrara ireo fandaharana amin’ny haino aman-jery mety hiteraka korontana”. “Samy voalazan’ny Lalàm-panorenana ny fahafahana maneho hevitra sy ny fahefan’ny Filohan’ny Repoblika hanao hamehana ara-pahasalamana”, hoy izy.
Araka ny fanazavan’i Clément Jaona, filohan’ny SMM ihany dia hampahafantatra ny Fanjakana momba an’io fitoriana io ny Filankevi-panjakana ato anatin’ny telo andro, na misy na tsia ny valinteny andrasana ao anatin’ny valo andro. « Ao anatin’ny iray volana kosa, no hamalian’ ny Filankevitra mikasika ny fangatahana fampiatoana an’ ilay didim-pitondrana » hoy izy.
Efa nisy ihany ny fihaonan’ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina, Andriatongarivo Lalatiana teny amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy tamin’ny solontenan’ ireo mpitantana haino amanjery sy ireo mpanao gazety voakasika tamin’iny fanapahan-kevitra, ary nojeren’ny Fanjakana ny fangatahana amin’ny hanafoanana ny didim-pitondrana.
“Tsy misy ny eritreritry ny Fanjakana ny hifehy na hanohintohina ny fahalalahana hiteny sy ny asa fanaovan-gazety. Fampiharana ny lalàm-panorenana mandritra ny vanim-potoana manokana no antony namoahana azy”, hoy ny minisitra ny Serasera sy ny kolontsaina tamin’ny solontenan’ireo mpanao gazety nihaona taminy, omaly. Nifanome toky ny roa tonta fa samy hanao izay anjara tandrifiny ka hanome vahana ny ady amin’ny valanaretina Covid-19. Nilaza ny minisitry ny Kolontsaina fa “hisy ny fanapahan-kevitra vaovao hanovana ilay efa nivoaka farany” anio.
Antenimierandoholona Mihemotra ny fankatoavana ny volavolan-dalàna momba ny toaka gasy
Fikajiana ny harem-bahoaka :: Hizara loka 32 tapitrisa ariary ny kaominina Antananarivo
Fandikana fihibohana :: Arahi-maso akaiky ireo olona an-jatony voasambotra